Mmeghachị ahụ enwetara ka Obasanjo gwachara Aisha Buhari okwu | odumblog
Mmeghachị ahụ enwetara ka Obasanjo gwachara Aisha Buhari okwu
posted on Jun. 05, 2019 at 11:36 am
Olusegun Obasanjo so n’otu onyeisiala Naijiria nwebụrụ akwadola nchegbu niile nke nwunye Onyeisi ala Muhammadu Buhari bụ Aisha gosipụtara banyere enweghi ezi nchekwa na nsogbu ndi ọzọ nke na-eche ndi Naijiria ihu na obodo a. Otu ọ dị. Obasanjo dụrụ ya ọdụ ka ọ gwa di ya okwu gbasara obodo a.
N’izu gara aga, Aisha bụ nwunye Onyeisi ala chọpụtara na ego gbasara mmemme ilekọta ndi mmadu anaghị aga dịka esiri dee ya n’akwụkwọ. Ọ sịrị na mmemme a amịtaghị ezi mkpuru n’Adamawa na Kano. Sọọso, local gọọmenti abụọ nwetara ihe na mmemme a na Kano. Nke a abụghị ezigbo ihe.
N’ụbọchị Satoodee, Aisha mara ndi ọgbasara ichebe obodo aka n’ihu ka ha mee ngwa ngwa kwụsị oke ohi na nsogbu enweghi nchekwa dị na obodo a.
Obasanjo kelere ya maka obi ike o nwere ikwuputa ihe ndi a.
Ụfọdụ otu nke gụnyere ndi Ohaneze ndi Igbo, ndi ‘Yoruba Socio-Political Group’ a na-akpọ ‘Afenifere’ ekwuola na ọ dị mma bụ otu Obasanjo siri zie Aisha ka ọ gwa di ya eziokwu gbasara Naijiria.
Onye enyemaka onye odee akwụkwọ ndi Ohaneze bụ Charles Ibegbu kọwara Aisha Buhari dịka nwanyị obi oma na onye hụrụ obodo n’anya. Ọ gara n’ihu kwuo ka ọ rịọ di ya ka o nwee ike i lebara nsogbu ndi a anya.
N’otu aka ahụ, ndi Afenifere kwuru na nwunye onyeisi ala nwere ikike ikwuputa otu o si dịrị ya maka obodo a tụmadị na di ya gwara ya n’ebe kwesiri ya bụ n’ime ụlọ na n’usekwu.
Ndi ‘Arewa Consultative Forum (ACF) ekwuọla na ha enweghi nsogbu n’ọdụ Obasanjo dụrụ nwunye onyeisi ala.
Tags:Aisha BuhariNigeriaNigerian PoliticsObasanjoPoliticsPresident Buhari
odumblog June 5, 2019
Ihe Atiku kwuru maka enweghi nchebe na ntọrọ na ozi oziri na Sal